wax ugu weyn ee aad heli doonto in ay waayo-aragnimo ee Florence yihiin jidadka soo jiidasho iyo dunida-caan Florence Cathedral ama Duomo samayn Firenze. Marka aad u aragto in, Florence noqdo meel soo jiidasho leh ee dhammaan dadka safarka ah.
Marka aad hesho si aad Padua, Hubi in aad booqato xarunta magaalada Prato della Valle. Waa mid ka mid ah god weyn ee magaalada, oo waxaa ka buuxsamay Sidaana qurux mid is illowsiin kartaa.
Waxaad gaari karo dhowr magaalo oo ku taal xeebaha badda ay ka Venice. Si kastaba ha ahaatee, waxaan dareemayaa in laba ka mid ah safarada maalinta ugu wanaagsan ee ka Venice in Lake Garda u baahan yahay inuu ka mid ah magaalooyinka Peschiera iyo Sirmione. Si aad u iyo Lake Garda gaaraan, waxaad qaadan kartaa mid ka mid ah dhowr tareenada in fasax Venice maalin kasta.